Shiinaha SPC Dabaqa SM-023 Soosaarka iyo Warshadda | Dheeraad ah
3.7mm SPC SAGXADA (N) 1
3.7mm SPC SAGXADA (N) 2
4mm SPC SAGXADA
4mm SPC SPC (N)
4.5mm SPC SAGXADA
4.5mm SPC SAGXADA (N)
5mm SAGXA SPC
5.5mm SPC SAGXADA (N)
6mm SAGXA SPC
6mm SPC SPC (N)
8mm dabaqa WPC (N)
10.5mm WPC SAGXADA (N)
12mm dabaqa WPC (ABA)
12mm WPC SAGXADA (Hollow)
SPC Dabaqa SM-056
SPC Dabaqa SM-055
SPC Dabaqa JD-063
SPC Dabaqa JD-062
SPC Dabaqa JD-061
SPC Dabaqa JD-060
Dabaqa SPC 1903
Dabaqa SPC 1902
Dabaqa SPC 1901
Dabaqa SPC 503
SPC Dabaqa 501
SPC Dabaqa SM-053
SPC Dabaqa SM-023
SPC Dabaqa SM-021
SPC Dabaqa SM-020
Dabaqa SPC 207
Dabaqa SPC 203
Dabaqa SPC 202
Qiimeynta dabka: B1
Fasalka biyuhu: dhammaystiran yahay
Darajada ilaalinta deegaanka: E0
Kuwa kale: CE / SGS
Faahfaahinta: 1210 * 183 * 4mm
1. Ilaalinta deegaanka ee cagaaran. Dabaqa SPC waa nooc cusub oo walxo dabaq ah oo la ikhtiraacay ka jawaab celinta yareynta qiiqa qaran. PVC, waa sheyga ceyriin ee sagxadda SPC, waa mid deegaanka u roon oo aan la-cusbooneysiin karin. 100% waa bilaash maadada 'formaldehyde', lead, benzene, biraha culus, kansarka jirka, isbadal ku yimaada falaadhaha iyo shucaaca. Runtii waa ilaalinta deegaanka ee dabiiciga ah. Dabaqa SPC waa shey dib loo isticmaali karo, taas oo ahmiyad weyn u leh ilaalinta khayraadka dabiiciga ah iyo bey'ada dhulkeena.
2. 100% biyuhu ma galaan, PVC wax xiriir ah oo biyo ah kuma laha, oo malahan caaryo qoyaan badan awgeed. Xilliga-roobaadka meelo badan oo koonfurta ah, sagxadda SPC wax saameyn ah kuma yeelan doono uur-ku-soo-baxa, waa xulasho wanaagsan oo dabaqa ah.
3. Ka-hortagga dabka: heerka ka-hortagga dabka ee dabaqa SPC waa B1, marka laga reebo dhagaxa oo keliya. Si otomaatig ah ayuu u bakhtiinayaa 5 ilbidhiqsi ka dib ololka. Waa olol celin, gubasho aan iska caadi ahayn, mana soo saari doonto gaasas sun ah oo waxyeelo leh. Waxay ku habboon tahay munaasabadaha leh shuruudaha dabka ee sarreeya.
4. Antiskid. Marka la barbardhigo qalabka dabaqa caadiga ah, dabaqa nano fibre-ka wuxuu dareemayaa xannibaad badan marka lagu wasakheeyo biyaha mana sahlana in la siibto. Markasta oo ay biyo kulmaan, ayay sii astringent tahay. Waxay ku habboon tahay qoysaska leh dadka da'da ah iyo carruurta. Goobaha caamka ah ee leh shuruudaha amniga guud ee sare, sida garoomada diyaaradaha, isbitaalada, xanaanooyinka, iskuulada, iwm.
5. Super-u adkeysiga u adkeysta. Lakabka xirashada u adkaysta dusha sare ee dabaqa SPC waa lakab hufan oo iska caabin ah oo ay farsameeyaan tikniyoolajiyad sare, kacaankeedana u adkeysata dharka wuxuu gaari karaa ilaa 10000 kacaan. Marka loo eego dhumucda lakabka u adkaysta dharka, nolosha adeegga dabaqa SPC wuxuu ka badan yahay 10-50 sano. Dabaqa SPC waa dabaq cimri dheer, gaar ahaan wuxuu ku habboon yahay meelaha caamka ah ee dad badani qulqulaan isla markaana lebiskoodu aad u sarreeyo.
6. Iftiin aad u hooseeya iyo mid khafiif ah, dabaqa SPC wuxuu leeyahay dhumuc dhan 3.2mm-12mm, miisaan fudud, in ka yar 10% qalabka dabaqa caadiga ah. Dhismooyinka dhaadheer, waxay ku leedahay faa iidooyin aan lala barbardhigi karin jaranjarooyinka iyo keydinta boosaska, waxayna ku leedahay faa iidooyin gaar ah isbadalka dhismayaasha hore.
7. Waxay ku habboon tahay kuleylka dhulka. Dabaqa SPC wuxuu leeyahay habeyn heerkul wanaagsan iyo kala-baxa kuleylka oo isku mid ah. Waxay sidoo kale u ciyaartaa kaalin tamar-badbaadin qoysaska isticmaala foornada derbiga ku dhejisa kuleylka sagxadda dhulka. Dabaqa SPC wuxuu ka gudbaa cilladaha dhagaxa, dhoobada dhoobada, terrazzo, barafka, qabow iyo sibiibixnimada, sidaas darteed waa xulashada koowaad ee dabaqa kuleylka.
Maqaarka dusha sare Qalabka Alwaaxda
Guud ahaan dhumucdiisuna 4mm
Khadka hoose ption Ikhtiyaar） Eva / IXPE (1.5mm / 2mm)
Xiro Lakabka 0.2mm (8 Mil.)
Qeexitaanka cabbirka 1210 * 183 * 4mm
Xog farsamo ee gogosha spc
Degganaansho mug leh / EN ISO 23992 Waa laga gudbay
Iska caabinta xoqida / EN 660-2 Waa laga gudbay
Iska caabin warqad / DIN 51130 Waa laga gudbay
Caabbinta kuleylka / EN 425 Waa laga gudbay
Xayeysiin adag / EN ISO 24343 Waa laga gudbay
Diidmada gawaarida gawaarida / Gudbinta EN 425 Waa laga gudbay
Iska caabinta kiimikada / EN ISO 26987 Waa laga gudbay
Cufnaanta qiiqa / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Waa laga gudbay
Hore: SPC Dabaqa SM-022
Xiga: SPC Dabaqa SM-050
SPC Dabaqa SM-028
SPC Dabaqa SM-022
SPC Dabaqa SM-027
SPC Dabaqa SM-025
Cinwaanka: Lambarka 3 Xiwu Lane, Qiqin Industrial Park, Aagga Horumarinta Danyang.
Telefoonka: +86 13775507979